रविका दाई हरिशरणको प्रश्नः स्वतन्त्र हुन स्वतन्त्र पार्टी किन चाहियो ?
मङ्गलबार, आषाढ ७ २०७९
पूर्वसञ्चारकर्मी हरिशरण लामिछानेले भाइ रवि लामिछानेले घोषणा गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा आफू आजिबन नरहने घोषणा गरेका छन् ।
काठमाडौं । पूर्वसञ्चारकर्मी हरिशरण लामिछानेले भाइ रवि लामिछानेले घोषणा गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा आफू आजिबन नरहने घोषणा गरेका छन् ।
रवि लामिछानेले आफ्नो नयाँ राजनितिक दल खोलेका घोषणा गरेको केही बेरमा समाजिक संजालमा आफ्नो धारणा राखेका हुन् । रवि लामिछानेले आज घोषणा गरेको नयाँ पार्टीमा परिवारवाद नरहने बताएका छन् । 'नया पार्टी घोषणा गरेकोमा रबि लामिछानेलाई बधाई । पार्टीको नीति अनुसार, परिवारबाद निषेध गरिनु राम्रो प्रयास हो। यस क्रममा मनमा लागेको एउटा रोचक कुरा' भन्दै उनले लेखेका छन्, 'कुनै पनि नया सदस्यले अब देशभर आफ्नो जन्मकुन्डली लाई अर्को सदस्यसङ्ग भिडाइ नाता ूअप्रमाणितू भएको प्रमाणपत्र लिएर मात्र पार्टी प्रबेश गर्नु होला। पछि आपसी मायाप्रेममा परि बिहेबारी भै कुनै अवस्थामा नाता प्रमाणित भएमा सदस्यता खारेज हुन सक्छ है।'
“दर्ता हुन बाँकी सो पार्टीका कुनै पनि गतिविधीमा म परिवारको नातेदारको नाताले नैतिक रूपले संलग्न हुने त कुरै भएन । राजनैतिक रूपले त्यो पार्टीमा म आजीवन रहने छैन भन्ने जानकारी पनि गराउँदछु,” उनले फेसबुकमा लेखेका छन् ।
उनले स्वतन्त्र हुनलाई स्वतन्त्र पार्टी किन चाहियो भन्दै प्रश्नसमेत गरेका छन् । 'स्वतन्त्र र दलगत राजनितिका लागि म सङ्ग अपार अवसर र सम्भाबना छन। बाकी कुरामा comment गर्ने मेरो हैसियत छैन। नेपाल आमाको एक स्वतन्त्र नागरिकको नाताले मेरो जीवन देशको सेवामा हमेसा समर्पित रहने छ। स्वतन्त्र हुन स्वतन्त्र पर्टी किन चाहियो ?
तीजको गीतमा अभद्र र द्विअर्थी अपाच्य शब्द नराख्न प्रतिष्ठानको अनुरोध
आलिया भट्ट गर्भवती !